महाश्वेता देवीकोः “अक्लान्त कौरव” शृङ्खला १८ | साहित्यपोस्ट
प्रकाशित २४ जेष्ठ २०७८ ०६:०१
माधवले भन्यो, “ लालटीन बालेर र कुर्सी सजाएर बसीबसी यस्ता कुरा सोधेर केही फाइदा हुन्न ,बाबुसाहेब । हामीलाई केही भन्नु छैन । शशी बाबु समितिको मुख्य मान्छे हुन् । हामीलाई आधा मजुरी दिन पनि दाँतबाट पसिना निकाल्छन् । उनैलाई सोधेर हेर्नुस न । भन्नुस शशी बाबु, तपाईँ नै जवाफ दिनुस ।”
फेरि माधवले भन्यो, “ उठौँ सबै जना । घर जाऊँ अब ।”
र ,उनीहरू सबै जना उठेर हिँडे ।
छक्क पर्दै द्वैपायनले सोध्यो, “के भयो ? केही बुझिरहेको छुइनँ म त । यिनले कुनै आन्दोलन त ग¥या होइनन् ?”
शशीले भन्यो, “टुडुको नाम लिनुभयो । त्यसै पनि यिनीहरू हामी कसैलाई विश्वास गर्दैनन् ।”
“पवन किसकु खेजुरहाटामा छ ?”
“अँ , जाऊँ । फर्कौँ ।”
“भोलि त्यहीँ जाउँला ।”
भोलिपल्ट उनीहरू खेजुरहाटा गए । त्यहाँ पु¥याइदिएपछि गोराले भन्यो,“म जीप लिएर जान्छु । भुइँयाको जीप हो । त्यहाँबाट उसको ड्राइभरले लगिहाल्छ ।”
“इन्द्र , ऊसँग घुमेर म के गरौँ ? कहाँबाट के गर्न आएको हो यहाँ ? कसलाई के थाहा छ र ? शहरमा मेरो काम पनि छ ।”
द्वैपायनले भन्यो,“जीप चाहिँदैन ।”
“कसरी फर्कनुहुन्छ त ?”
“पैदल वा गोरुगाडामा पनि ।”
“ठीक छ । हिँडनुस ,भेटघाट गराइदिन्छु ।”
“कहाँ ? कोसँग ?”
“समितिको कार्यालयमा । बैरागी सर्दारको घरमा कार्यालय छ । मन्त्री उही हो । जाऊँ त भनियो …तर बैरागी भेटिएला के ? धान रोपाइका बेलामा ऊ गाउँमा विरलै बस्छ । ”
कच्ची घरकोएकातिर बैरागीको आवास र अर्कोतिर समितिको कार्यालय । बिचमा बार । उनीहरू आउने खबर पहिले नै आइपुगेको थियो । तर तिथिमिति ठेगान गरिएको थिएन । बैरागीको छोराले समितिको कोठा खोलिदियो अनि त्यहाँ बाँधिराखेको खसीबाख्रा डो¥याउँदै अर्कोतिर लग्यो । भुइँमा गुन्द्री ओछ्याइएको थियो । कुनामा कागजपत्रको चाङ थियो । इन्द्र र द्वैपायनले गुन्द्रीमा आफ्नो झोलीझाम्टा बिसाए । बैरागीकी दुलही टाउकामा दाउराको भारी बोकेर आँगनमा देखा परी । दाउराको भारी बिसाउँदा बिसाउँदै उनीहरूलाई देखेर भनी, “ घरमा छैनन होला , कतै गएका होलान् ।”
इन्द्रले भन्यो, “ठीक छ । हामी बसिहाल्छौँ ।”
दुलही बिरामी जस्ती थिई । मसिनो स्वरमा भनी, “त्यतातिर इनार छ ,पानी छ । तपाईँहरू नुहाइधुवाई गर्नुस । म भात बसाउँछु । चिया बनाऊँ कि ?”
मान्छेहरू आउँदै होलान । चियाको बन्दोबस्तले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । शख्खरको सादा चिया,त्यसमा अदुवाको रस वा दूध हँुदैन । खाना बनाउनका लागि इन्द्रले काममा सघाइदियो ।इनारबाट पानी तानिदियो ,दाउरा चिरिदियो । बैरागीको जहानले नाइनास्ति गरिन । बरु पछि भनी, “भात र पोस्तामात्र हुन्छ । अरुथोक केही पनि छैन ।”
“यति नै प्रशस्त भयो ।”
“मानिसहरू कति थोक दिन खोज्छन् तर ऊ केही पनि लिँदैन ।”
बैरागी आइपुग्दा साँझ परिसकेको थियो । द्वैपायनलाई देखेर आत्तिए जस्तो भयो । इन्द्रसँग भन्यो, “ पवनको कोठा उतातिर छ । यसैपालि नयाँ बनाएको हो । तपाईँहरू त्यतै हिँडनुस । ”
“होइन , यहीँ ठीक छ ।”
द्वैपायनले असजिलो मानिरहेको देखेर इन्द्र मनमनै खुसी भइरहेको थियो । भन्यो, “ प्राकृतिक कर्मबाट निवृत्त हुन बाँसघारीतिर गएर ‘भेटी चढाउनु’ ।”
द्वैपायनले सहिदको जस्तो मुखमुद्रा बनाउँदै सोध्यो,“ भेटी ?”
“खाल्डोमा अनुदान दिने कार्यलाई भेटी भन्छन् यतातिर ।”
बैरागीले भन्यो, “भेटीको राम्रो सुविधा छ । खाल्डो भरिएपछि माटोले पुरिदियो अनि खाद बनायो । त्यो खाद खेतमा खन्याएपछि माटोमा सुन फल्छ ,सुन । पहिले त कोही पनि त्यसो गर्न मान्दैनथे । म भन्छु फोहोर त माट्टिइसकेपछि फोहोर रहँदैन,माटो बन्यो माटो । योभन्दा राम्रो त कुनै खाद हुनै सक्दैन ।”
इन्द्रले जिस्क्याउँदै भन्यो, “तपाईँ जानुस । नजानेभए जागुला नफर्कुन्जेलसम्म चेपेरै बस्नुस ।”
”सर्प त छैन ?”
”हेले –ढेमना सर्प त होला नै ।”
द्वैपायन उत्सर्जनका लागि जान त गयो तर तुरुन्तै फर्केर आयो ।
बैरागीको समितिको कोठा । मध्यान्हमा भात र पिँधेको पोस्ता । उत्सर्जनका लागि जाँदा सर्पसँग जम्काभेट हुने सम्भावना । गाउँसँग घनिष्ठ परिचय बढाएर उसलाई वा गाउँलाई कुनै लाभ भएको जस्तो लाग्दैन उसलाई । इन्द्रले खुसी जाहेर गर्दै भन्यो, “ अब जीप आउँदैन । हिलो,गेगर र माटोमा लडदैपडदै पैदलै हिँडनु पर्छ । अबचाहिँ साँच्चै नै गाउँसँग तपाईँको साक्षात्कार हुने भयो ।”
एकछिनपछि फेरि सोध्यो, “भन्नुस् त ,किन आउनुभएको हो तपाईँ ?”
“भनँुला ,भनँुला ।”
साँझमा उनीहरू पवनको घरमा गए । पवन किसकु । आफ्नो जातिमा धनीमानी । पन्ध्र बिघा जमीनको मालिक । देख्दै थाहा हुन्छ उसको सुखसुविधा । सफासुग्घर आँगनमा सुङ्गुरको खोर र गाईको गोठ ।चौतारोमा झुण्डेको कालो पाटी अनि फलेक ठोकेर बनाइएको तखतामा पातला पातला पुस्तकहरू । साँझ साँझतिर उसको दुलही,आमा र छोरी डालोमा माछा बोकेर आइपुगे । नजिकैको नहरबाट माछा समातेर ल्याएका । पवन कुनै राजनीतिक पार्टीमा सामेल भएको छैन।
दिल्ली युनिभर्सिटीमा ‘द्रौपदी’ले उठाएको विवाद
बि बि सी १४ भाद्र २०७८ ००:०१
३१ जेष्ठ २०७८ १४:०१
१७ जेष्ठ २०७८ १५:०१
१० जेष्ठ २०७८ १२:०१
इन्दको नाम सुन्नासाथै पवनले उसलाई चिनिहाल्यो । भन्न लाग्यो, “चुडामणिसँग झगडा गर्छौ ,त्यो पनि खाली हात ?नक्सली आन्दोलनकै बेलादेखि पुलिससँग उसको लोग्ने स्वास्नीको जस्तो नाता बनेको छ । उसले एउटा बन्दुक खोसेको थियो । अचेल ऊसँग तिनवटा बन्दुक छ । दनादन चलाउँछ । अनि यी महाशय को हुन ?”
”यिनकै लागि त आएको हँु ।”
”किताब लेख्छन् कि ?”
द्वैपायनले भन्यो, “होइन , होइन ।”फेरि वरिपरि आँखा डुलाउँदै सोध्यो, “तिमी लेखपढ सिकाइरहेका छौ तर कसलाई ?”
“जो आउँछन् ,तिनैलाई ।”
“कुनै सरकारी कार्यक्रम हो कि ?”
“लेखपढ गर्न जानुन,यही उद्देश्यले । पुस्तक पढेर ज्ञान गुन सिकुन । यहाँका मान्छेहरू बिचरा केही पनि जान्दैनन । यसैले मार खान्छन् बिचराहरू । ”
“जाने ,थाहा पाएभने ?”
“हाम्रो हक के हो – यत्ति मात्र थाहा पाउन सकुन् । सरकारले जे दिइरहेको छ ,त्यति पनि थाहा छैन यिनलाई । नक्सली आन्दोलन चल्यो,फेरि बसाईले लडाइ चलाए । कानूनविदलाई गुहारेर प्रताप कुडाको बेनामी र ऐलानी (खास) जमीन पत्ता लगायौँ र खोस्यौँ । सबैलाई अलिअलि भए पनि बाँड्यौँ । मेरो घरमा तेह्र जना छन् ,जम्माजम्मी पन्ध्र बिघा जमीन छ । दुई वर्षसम्म कसैले केही ध्यान दिएनन । प्रतापका मानिसहरूले हाम्रो जमीन खोसेर लिइरहेका छन् । मेरो जमीन किन दिन्थेँ म ? कानून पनि थाहा छ । लडाइ लडन पनि जानेको छु ।”
“हकका लागि लडछौ ?”
“नलडे त सबै हडपिहाल्छन् । यो सारा जमीन सन्थालहरूको जङ्गलबाट लिइएको हो । कहाँ गयो त्यो सारा जमीन ? लडाइ नलडेरै गुमेको हो नि । त्यसैले लडाइ लडछु । हक चाहिन्छ ।”
“तिमी त मोजै गरेर बस्या छौ !”
“त्यो त छ । आनन्दै छ ।”
“आफ्नो समाजको अरु मानिसभन्दा त सम्पन्नै छौ नि ।”
“भन्दै जानुस,हजुर ।”
“पछिल्ला दश वर्षमा तिमीहरूले कुनै आन्दोलन गरेनौ । यस्तो किन भयो ,भन्न सक्छौ ? के लाग्छ तिमीलाई ?”
“सबै कुराको जवाफ दिन्छु । अरु जेजे सोध्नु छ , सोध्नु ।”
“तिम्रो समाजमा निकै थोरै मान्छेहरू मात्र आन्दोलनमा उत्रिएका छन ,धेरै मानिस आन्दोलनमा आएनन । जो पढेलेखेका छन ,तिनै मानिसहरू समाजबाट परपर हँुदै गइरहेका छन् । उनीहरू कुनै पनि आन्दोलन चाँहदैनन, होइन त ? अनि कुन बाटोबाट तिमीलाई हक मिल्दछ , भन त ?”
“के भनौँ ? कुनचाहिँ कुरो भनौँ ?”
“तिमीलाई देख्नासाथै थाहा भइहाल्छ । यहाँसम्म कि सन्थाल नेता बसाई टुडुको आन्दोलनको कुनै असर पनि परेन तिम्रो समाजमा । होइन त ?”
“जुन नाम तपाईँ पटकपटक लिइरहनु भएको छ ,त्यति सजिलै त्यो नाम समाजबाट मेटिँदैन ,बुझ्नु भयो ? को हो तपाईँ ? आँखामा चश्मा, हातमा मेसिन । यहाँ आएर तपाईँ फटाफट उनको नाम सोध्नुहुन्छ ,किन ? अहँ ,हँुदैन । म केही पनि बताउँदिन तपाईँलाई । त्यस बेला नक्सल आन्दोलन चलिरहेको थियो । बसाईले हामी सबैलाई आह्वान गरेका थिए । त्यसबेला पनि एकजना महाशय आएका थिए । सुधो अनुहार बनाएर हामीसँग अनेक जाति सोध्थे र पुलिसलाई सल्लाह दिन्थे । ”
“अरे , म त पुलिसको मान्छे हुइनँ नि ।”
“होइन ,होइन ।” पवनले नकारमा टाउको हल्लाउँदै भन्यो, “अहिले भन्नुभयोकि म बाँकी समाजभन्दा सम्पन्न छु । यस्तो किन भन्नुभयो ? मसँगै सबैले जमीन पाएका थिए । डरधम्की र कुटपिटका कारण उनीहरूले जमीन छाडिदिए । आफ्नो जमीन त कब्जा गर्छु नै ।जबसम्म त्यो काम सम्पन्न हँुदैन तबसम्म खाइपिई गरी बचेको आफ्नो जमीनको फसललाई धर्मभकारी बनाएर राखेको छु । ती बाबुलाई थाहा छ नि, सोरेनले फसल यसैगरी जम्मा गरेका छन् । हामी अलि फरक तरिकाले राख्छौँ । पढेलेखेको सन्थाल पनि समाजको कुरो सोच्दछन् ,समाजसँग सरोकार राख्दछन् । रह्यो कुरो लडाइको । लडाइमा को सामेल भएन ? कसले पिटाइ खाएन ? कस्तो खाले कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ ?”
“मैले पनि नौ कक्षासम्म पढेको छु ,तपाईँहरूकै स्कूलमा । खुब पिटाइ खाएँ । अब बल्ल कुरो बुझ्दैछु ।”
द्वैपायन जवाफ दिन नसकेर फर्केर आएको थियो । त्यही राति अपमानित अस्वीकृत द्वैपायनले इन्द्रलाई आफ्नो शोधको विषयका बारेमा भन्यो । अरु कुनै बेला भए शायद भन्ने थिएन । तर पहिले माधव र त्यसपछि पवनबाट अपमानित हुनुको अनुभव उसको जिन्दगीमा पहिलो अनुभव थियो । धेरै पहिले जुन बेला ऊ विश्वविद्यालयको छात्र थियो ,सन्थालहरूको गुप्त जीवनको शोधको सिलसिलामा सन्थालको एउटा विवाह हेर्न गएको थियो । जब काला मानिसहरू नाचगानमा मस्त थिए त्यसैबेला एकजना बुढोले भन्यो,“तल्सिङ जोतदारको टाउको छिनाएर आएको हँु । त्यसैले नाचगानमा रमझम बढेको हो ।” यो सुनेर उसको त हंसले ठाउँ छोड्यो,मनमा चर्को डर पस्यो । सन्थालका बारेमा सोच्दा मनै आतङ्कित हुन्छ । यिनको अनुहार देख्नासाथै मन अत्तालिन्छ । एकदम डर लाग्छ । यो डर ,यो अविश्वास उसको मनको भित्री तहमा डेरा जमाएर बसेको छ ।
र, द्वैपायन लामो समयसम्म आम मानिसको सम्पर्कमा गएन । सामन्त,गोरा,इन्द्रहरूसँग भेट हँुदा पनि उसको मनको छटपटी बढछ । माधव ,पवन अनि भतुवा केटो – धरतीका यी खाँटी सन्तानसँगको साहचर्य पनि उसलाई प्रीतिकर लाग्दैन ।
द्वैपायन आफूजस्तै नक्कली मानिसहरूसँग मिल्दछ । उसको मन त्यहीँ रम्दछ जहाँ ऊ लामो समयदेखि सुन्दै आइरहेछ कि ऊ असामान्य विद्वान हो ,उसको अध्ययन विशाल छ । त्यो संसारमा उसलाई आदर सम्मान मिल्ने गरेको छ । श्रद्धा,सम्मान र प्रशंसाको ऊ आदि बनिसकेको छ । यिनै कुराहरूले आफूउपर उसको आस्था जागृत भएको छ । पहिले माधव र त्यसपछि पवनले आफ्नो भङ्ज्याहा कालो पञ्जाले उसको आत्मविश्वासको नक्कली आवरण र असत्यको काँचुली झिकेर फालिदिए र उसलाई खारेज गरिदिए । र , अब द्वैपायन चुहुने घडाजस्तो भएको छ ,उसको सारा पाण्डित्य वा व्यक्तित्व सापटी लिएको जस्तो भएको छ । आफ्नो भन्नु ऊसँग केही पनि छैन । त्यसैले ऊ निकै कमजोर भइसकेको छ । उसको आत्मविश्वास डगमगाइसकेको छ ।यदि मनको यस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए उसले इन्द्रसँग यी कुराहरू भन्ने थिएन ।
मनको यस्तो अवस्था हँुदाहँुदै पनि पहिले उसले यस्ता कुरा कसैसँग पनि भन्न पाएन । बैरागीको घरमा फर्केर आएपछि कालो धुवाँ फाल्दै गरेको लालटीनको उज्यालोमा गुन्द्री देखेपछि बल्ल उसले राहतको सास फेरेको थियो । त्यसपछि इन्द्रसँग उसले सोध्यो,“ अलिकति ह्विस्की पिउँछौ ?”
“अहँ । ”
“म पिउँछु । ”
“यिनको गिलास पानी पिउनका लागि हो । आफ्नो थर्मसको गिलासमा पिउनुस न । ”
“त्यसैमा पिउँछु ।”
“सादै पिउनुहुन्छ ?”
“पानी पाइएला त ?”
“किन, यहाँ आएर पानी खानुभएको छैन ? तपाईँ पनि बिचित्रै हुनुहुन्छ ! गाउँ देहातमा घुम्ने लहड किन चल्छ तपाईँलाई ?”
“ म केही पनि खाँदिन ।”
उड्दा उड्दै – किन बनायौ उसलाई मृत्युको निसाना ?